Voces de Mujeres [Feon’ireo vehivavy]: “Fihetsika Revolisionera Ny Fandraisam-pitenenana” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Jolay 2018 13:18 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, Ελληνικά, русский, English, Italiano, Română , ਪੰਜਾਬੀ, Español
Ny andiany faharoa [amin'ny tetikasa Voces de mujeres dia mitantara] ny tantaran'ireo mpikatroka mavitrika, vehivavy teratany, poety, mpanao gazety, mpilalao baolina kitra, mpanao ady totohondry, mpikatroka mafana fo amin'ny fiarovana ny faritany sy ny natiora, mpitaingina kodiarandroa, mpanao fanatanjahantena, irakiraka mandeha bisikilety, mpanasitrana, mpampivelona, ireo manana fananahana roa ary ireo izay namoy aina vokatry ny herisetra. Pikantsary avy amin'ny lahatsary fahatsiarovana an'ireo atrikasa, azo alaina amin'ny YouTube.
Ny Voces de Mujeres : ireo tantara izay manova antsika dia Laboratoara multimedia iray mikatsaka fomba vaovao hitantarana ireo tantara momba ireo vehivavy izay misarika ny tontolo iainan'izy ireo sady manova izany. Ho an'ireo mpikarakara, ireo fifanarahana momba ny miralenta dia fanalahidy iray manan-danja mba hahatakarana ny fomba fijery ny andraikitr'ireo vehivavy ao anaty fiarahamonina sy ny fomba namolavolana ireo fitantaràna manoritsoritra an'io fandraisana anjara io.
Lahatsary iray an'ilay tetikasa azo alaina amin'ny YouTube no mampivoitra ireo sary sy ireo porofo amin'ilay andiany faharoa izay natao tamin'ny taona 2017. Ny fanatontosana io tetikasa io dia nampitambarana ireo vehivavy sy ireo mpikatroka momba ny miralenta avy amin'ireo toerana samihafa ary nampiasaina ho fototra amin'ireo tetikasa hafa manana tanjona amin'ny fitantaràna ny tantaran'ireo “vehivavy teratany, poety, mpanao gazety, mpilalao baolina kitra, mpanao ady totohondry, mpikatroka mafana fo amin'ny fiarovana ny faritany sy ny natiora, mpitaingina kodiaran-droa, mpanao fanatanjahantena, irakiraka mandeha bisikilety, mpanasitrana, mpampivelona, ireo manana fananahana roa ary ireo izay namoy aina vokatry ny herisetra.”
Eloísa Diez, iray amin'ireo mpikarakara, no manazava amintsika fa:
Miaraka miasa amin'ireo vehivavy sy ireo mpikatroka mafana momba ny miralenta avy ao anatin'ilay laboratoara multimedia izahay, izay handalinanay ny fomba mahatonga ny miralenta hisy dindo amin'ny fomba hitantaràna ireo tantarantsika, amin'ny alalan'ny fandrafetana an'ireo saritsarim-pitantaràna ary amin'ny fakàna ireo teknolojia izay hahafahanay manasongadina ny andraikitra maha-pitarika raisinay ao anatin'ireo finovàna ireo.
Mpitondra fahendrena avy amin'ireo razambe, mpanasitrana ary mpiambina ny faritany
Marobe ireo tetikasa Voces de Mujeres ary ny tanjon'ireo atrikasa dia ny hanokafana habaka afaka hifanakalozana hevitra sy hanomezana fitaovana ho an'ireo izay mandray anjara ao, mba hitantaràna an'ireo tantara izay manova. Amin'izao fotoana izao, ao anatin'ny sehatra iasan'ny Voces de Mulheres mavitrika dia ny hoe hitarina no teny fanalahidy: tsy maintsy miasa amin'ny tetikasan'ireo vehivavy hafa sy ireo mpikatroka mafana fo momba ny miralenta ireo mpandray anjara, fa tsy amin'ireo tetikasan'izy ireo ihany. Io no fepetra voalohany.
Ohatra tsara amin'izany ny asan'i Judzil Palma Ortega miaraka amin'ny sariny ao amin'ny lahatsarin'i de Rosalía Méndez Xool. Vehivavy maya avy ao Yucatán i Rosalia, tafasaraka tamin'ireo fomba amam-panao nentim-paharazana izay naharesy ankehitriny manoloana an'ireo fiovàna nentin'ireo fivoarana ara-kolotoraly meksikana netin'ny vaninvandro maoderina. Io fijoroana vaolombelona io no maha-zava-dehibe ny fampitàna am-bava an'ireo fahalalana izay manome tombony an'ireo taranaka taloha ary afaka manohy mitsabo sy mamelona an'ireo ankehitriny:
Io vehivavy io dia misolo tena ireo vehivavy mayas ankehitriny izay mandray anjara mba hijoroan'ny kolontsaina maya manoloana ireo fiovana ara-kolontsaina marobe. Manitrikitrika i Rosalia mikasika ny maha-zava-dehibe ny fampitana am-bava an'ireo fahalalany, satria ny fampiasana ireo zavamaniry ao anaty sakafo sy ireo fampiharana ara-medikaly, ivelan'ireo soa izay nentiny ho an'ireo taranaka fahiny sy ankehitriny, dia miaro ny tsy fahamarinan-toeran'ny tontolo iainana.
Mifandray amin'ny fiarovana ireo harena ara-kolontsaina sy ny fiarovana ny faritany ireo traikefa hafa, toy ireoan'i Mikeas Sánchez. Ao anatin'ity ampahana feo izay azo henoina eo amin'ny SoundCloud ity, miresaka miaraka amin'i Mikeas i Azalia Hernández ary mijery ny andraikitr'ireo vehivavy ao anaty vondrom-piarahamonina Zoque (izay any amin'ireo Fanjakana Meksikana an'i Chiapas, Oaxaca ary Tabasco) sady manana andraikitra amin'ireo taranaka vaovao sy ny fanabeazana azy ireo mifanaraka amin'ireo fomban'ny vondrom-piarahamonina:
Tsy nianatra espanolà mihitsy ny renibeko. Natahotra ny hanadino an'ireo andriamaniny izy. Natahotra izy ny hifoha indray maraina any ka ho foana tsy ho anaty fitadidiany ny fahasoavan'ireo zanany. Nino ny renibeko fa tsy afaka atao ny miresaka amin'ny rivotra afatsy amin'ny [fiteny] zoque. Vehivavy mahery ny [Renibeko sy ny reniko] [na dia tsy afaka nahazo ny fanabeazana [mahazatra] aza. Amiko izy ireo dia ohatra mivaingana mikasika ny ady sy ny rariny ara-tsosialy […] Nampianatra ahy izy ireo hahalala ny zava-drehetra mikasika ny filozofian'ny vahoaka Zoque.
Sombim-peo hafa no mitantara ny tantaran'ireo vehivavy izay mampianatra an'ireo vehivavy hafa hizatra ireo fomba samihafa sy marobe hitandremany ny vatan'izy ireo mandritra ny fotoana iterahana. Ireo Vehivavy miteraka no iantsoana an'io sombiny io ary hita ao ny fahalalan'ireo vehivavy mikasika ny vatany manokana, ny hoe hain-dry zareo ny m(amp)iteraka ary “betsaka toy ny hamaroan'ireo vehivavy ny fomba azo atao amin'io”.
Marobe ireo sombim-peo, lahatsary afaka raisina, fa ao koa ireo fijoroana vavolombelona ataon'ireo tetikasa hafa any amin'ireo tambajotra Voces de Mujeres sy ao anatin'ireo tahiry izay namondronana ireo tetikasa tontosa nandritra ny fandaharampotoana. Heno ao ny feon'ireo tanora vavy mpilalao baolina kitra avy amin’ireo vondrom-piarahamonina mazahuas, ireo vehivavy mpanao ady totohondry, ny “voakindy”, ireo zatovo mpanao gazety, ireo vehivavy irakiraka ary ireo hafa ihany koa.
Maharitra eo amin'ny enimbolana eo ho eo ny Voces de Mujeres ary tamin'ny andiany farany dia nahangona vehivavy 20 sy mpikatroka mafana fo momba ny miralenta. Ireo fikambanana mpikarakara toa ny Luchadoras, La Sandia Digital, SocialTIC, Subversiones ary ny WITNESS [amin'ny fiteny frantsay] dia nitondra ny fanohanany nifototra tamin'ireo asan-dry zareo nampifantohana tamin'ny fifandraisana ho an'ny fanovàna, ny fifehezana ny teknolojia, ny ezaka ataon'ireo vondrom-piarahamonina ary ireo kaody famokarana multimedia araka ny fijerin'ny miralenta sy ny maha-vehivavy.